I-China Ball Pool Toddler play Prod and Factory | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Ibhola Pool Toddler play
I-Ball pool ingahlanganiswa ne-rock ascing Island, i-slide ne-blow blowing system, njll. Ichibi libukeka lihle kakhulu lilonke, futhi nezingane zingajabulela amaphrojekthi ahlukahlukene. Ingqikithi eyenziwe ngokwezifiso ye-sea ibhola echibini ingakhethwa ngokuya ngemisebenzi yemakethe ukuqhubekisela phambili ukuthandwa kakhulu kuphrojekthi yakho.
I-Ball pool yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi eziqinile, futhi izinto zokwakha kanye nokwakheka kuhambisana ngokuphelele namazinga okuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Esedlule: Dlala i-Panal Toddler play
Olandelayo: Ukudlala kweSand Pit Toddler